မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာမဝင်ရဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းဆိုးဝါးလာနေတဲ့တရုတ် Zero Budget Tour ဆိုင်များ
မြန်မာနိုင်ငံကို လာတဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေထဲမှာ အာဆီယံနိုင်ငံတွေကနေ ဝင်ရောက်လည်ပတ်တဲ့ ခရီးသွားရာခိုင်နှုန်းက ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့ တရုတ်နိုင်ငံကနေ ဝင်ရောက် လည်ပတ်တာကတော့ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်… အဲဒီ တရုတ်ခရီးသွားတွေကို ဇီးရိုးဘတ်ဂျက် ခရီးသွားတွေလို့ တကမ္ဘာလုံးက သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်… မြန်မာနိုင်ငံကို ဇီးရိုးဘတ်ဂျက်နဲ့ လာရောက်ကြတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား အများစုဟာ ပြည်မကြီးက လာရောက်ကြတဲ့ တရုတ် …
ကျတော်ငယ်ငယ် ကားစီးရတာကြိုက်ပေမဲ့ အသက်20 လောက်မှာ ကားစီးရင် ကားမူးလာပါတယ် ကားမူးတက်တဲ့ ကျတော့သောက်ကျင့်ကို ကျတော်လွန်စွာမှမုန်းပါတယ် ကားစီးရင်ကားမူးပျောက် ဆေးသောက်ရပါတယ် မသောက်ဘဲကားစီးမ်ိရင် လူကမူးမော့နေတာ တစ်နေ့ ကျတော်မန်းလေးသွားတော့ ကားမူးသောက်ဆေးသောက်တာ မသက်သာဘဲ ဖြစ်နေတာ မူးချက်ကတော့ လက်ကုန်ပါဘဲ ဖြစ်ချင်တော့ ကျတော့ဘေးကကျတော်ဆရာမ ဒေါ်သန့်သန့်ဝင်းက လိုက်လာတာပါ ဆရာမကပြောတယ် ကားမူးရင် ဖယောင်းတိုင် ရင်ဘက်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ …
ကျတော်ငယ်ငယ် ကားစီးရတာကြိုက်ပေမဲ့ အသက်20 လောက်မှာ ကားစီးရင် ကားမူးလာပါတယ် ကားမူးတက်တဲ့ ကျတော့သောက်ကျင့်ကို ကျတော်လွန်စွာမှမုန်းပါတယ်။ ကားစီးရင်ကားမူးပျောက် ဆေးသောက်ရပါတယ် မသောက်ဘဲကားစီးမ်ိရင် လူကမူးမော့နေတာ တစ်နေ့ ကျတော်မန်းလေးသွားတော့ ကားမူးသောက်ဆေးသောက်တာ မသက်သာဘဲ ဖြစ်နေတာ မူးချက်ကတော့ လက်ကုန်ပါဘဲ ဖြစ်ချင်တော့ ကျတော့ဘေးကကျတော်ဆရာမ ဒေါ်သန့်သန့်ဝင်းက လိုက်လာတာပါ ဆရာမကပြောတယ်။ ကားမူးရင် ဖယောင်းတိုင် ရင်ဘက်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ …
မိန်းကလေးတွေက လူပျိုထက် အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းကို စွဲလမ်းမိတာဘာကြောင့်လဲ ? ၁။ လူပျိုတွေထက် အိမ် ထောင်သည်ယောကျာ်းကပိုစီးပွားရှာနိုင်တယ်ထင်လို့ လား တကယ်က စီးပွားရှာနိုင်တယ် မရှာနိုင်ဘူးဆိုတာ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ် ။ လူပျိုထက် စီးပွားရှာနိုင်အားနည်းလို့ မိသားစုအဆင်မပြေတဲ့အိမ်ထောင်သည်တွေအများကြီးရှိပါတယ် ။ ဒီတော့တွေးရမှာက အပျိုတစ်ယောက်အနေနဲ့ အိမ်ထောင်သည်ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကိုမက်မောစွဲလမ်းတာက သူ့ ကိုရေများများလောင်း (ငွေများများပေး)လို …
“ဟတ်​ကာ” ထံမှ ရရှိလာမယ့်​ ​သက်​​သေအ​ထောက်​အထားများ
“ဟတ်​ကာ” ထံမှ ရရှိလာမယ့်​ ​သက်​​သေအ​ထောက်​အထားများကို အများမြင်​​အောင်​ “Share” တစ်​ချက်​ဖြင့်​ မျှ​ဝေကြပါ​နော်​။ မကြာခင်​” ထိုင်းတရာဥပ​ဒေက” အရုက်​ကွဲခံရ​တော့မည်​။ လိင်​ကွန်​လူသတ်​မူ တရာခံ ဘယ်​သူလဲဆိုတာ အ​ဖြေမှန်​​ပေါ်​ပေါက်​ပါစေ ……….. မြန်မာပြည်သူလူထု အားလုံးကလဲ ၀ိုင်းဝန်းပီး ကူညီကာ ၀င်းနဲ့ဇော်လွတ်မြောက်ဖို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအုံးလား ….. များများရှယ်ပေးကြပါ…. ဒါမှမြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး သိသွားမှာပါ…. Source – FB …
Video file ပြန်ရှာတွေ့ပါပြီ မြန်မာနိင်ငံသားအားလုံး သမိုင်းမရိုင်းရအောင် လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု၌ ဖျောက်ခဲ့သောကွင်းဆက်တွေပါ
Video file ပြန်ရှာတွေ့ပါပြီ မြန်မာနိင်ငံသားအားလုံး သမိုင်းမရိုင်းရအောင် လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု၌ ဖျောက်ခဲ့သောကွင်းဆက်တွေပါ #များများရှဲပေးပါ သေဆုံသူ Mr.Miller ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်သူ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် စကော့တလန်ခရီးသွားဧည့်သည် Sean McAnna က မိမိအသက်ကို ကျွန်းပေါ်ရှိ ထိုင်း”မာဖီးယားဂိုဏ်း” က ခြိမ်းခြောက် ခဲ့သည်ဟု ဗြိတိန်သံရုံးနှင့် စာနယ်ဇင်း နှစ်ခုကိုပြောပြပြီး ခိုတောင်ကျွန်းကနေ သွေးရူးသွေးတန်းထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပါ …